I-PLM 3.2v 280Ah I-LiFePO4 ye-Prismatic LiFePO4 I-LFP iLithium yebhetri ye-EV, inkqubo yokugcina amandla elanga
Sinikezela ngomgangatho ophezulu we-3.2v 280Ah Prismatic LiFePO4 LFP Lithium Battery Cell ye-EV, inkqubo yokugcina amandla. ngumenzi oqeqeshiweyo onikezela ngophando, uphuhliso, ukuvelisa, kunye neenkonzo zokuthengisa zeeseli yeebhetri ze-lithium ion, kunye neepakethe zebhetri. Siyila kwaye senze iibhetri ezenziwe ngabantu kunye neeseli zeemfuno ezithile. Ibhetri yeLithium lifepo4 ebekwe ngokwezixhobo ukusuka kwi-3.2V-96V, 5AH-280AH, enokusetyenziswa kwi-RV, i-EV, inkqubo ye-Solar, i-E-bhayikhi, i-UPS, inkqubo yokugcina amandla, isikhululo sokunxibelelana, isikhululo se-E-scooter, izixhobo ze-E, igalufa. inqwelana, ukuphakama kwefolokhwe, ukucoca imoto, isitulo esinamavili sombane, kunye nokunye ukusetyenziswa komjikelo obanzi.
I-Lithium Ion Lifepo4 100ah ibhetri 3.2v Lifepo4 Iibhetri Iiseli zokuGcina Amandla ebhetri eKhaya Amandla oShushu oMbane.
Sinikezela ngemigangatho ephezulu yeLithium Ion Lifepo4 100ah Ibhetri 3.2v Lifepo4 Iiseli zebhetri Solar Ukugcina Amandla ebhetri Ekhaya Amandla oMbane weSolar. Ngokwendlela eyahlukeneyo yeebhetri zeLFP, ingalungisa izikroba ezihambelanayo, ii-washers kunye neeplates.kuba sikwindawo ngqo yefektri, sinika i-OEM / i-ODM ngokwezifiso, ngaphandle komthamo, ubungakanani, inokulungiselela nawo onke amalungu owafunayo kwiprojekthi yakho. Nceda uzive ukhululekile Ukunxibelelana nathi xa ufuna iibhetri.